MỊNỊSTRỊ OKWU BANYERE ALA-ANYỊ:ỌRỤ A EDOGHỊ M ANYA-AREGBESHỌLA – hoo!haa!!
MỊNỊSTRỊ OKWU BANYERE ALA-ANYỊ:ỌRỤ A EDOGHỊ M ANYA-AREGBESHỌLA
Abụja: Ogbeni Rauf Aregbeshọla, Mịnịsta ọhụrụ na-ahụ maka okwu ala-anyị (Interior) ekwuola na ọrụ mịnịstrị ahụ edoghi ya anya.
N’okwu ya oge ndị ọrụ mịnịstrị ahụ na-anabata ya, Gọvanọ ahụ chịburu Ọshụn Steeti kwuru sị, ” A maghị banyere atụmatụ nakwa usoro ọrụ mịnịstrị a karịa ihe m na-agụta n’akwụkwọ akụkọ. Mụ na mịnịstrị a amaghị onwe anyị.
Aregbeshọla, onye bụ omenka(engineer) nyeziri odeakwụkwọ nlekọta (permanent Secretary) mịnịstrị ahụ, Oriakụ Jịọjị̀na Ehuria, onye nke na-elekọta mịnịstrị ahụ kemgbe e kposara ndị Mịnịsta pụrụ apụ, ka ọ gaa n’ihu ilekọta mịnịstrị ahụ anya ruo ụbọchị Mọnde ọ ga-enyefezi ya ọchịchị n’aka n’uju.
N’okwu nnabata ya, odeakwụkwọ nlekọta mịnịstrị ahụ kelere Aregbeshọla ma kwukwaa na ọ bụ udiri mmadụ ya, onye na-agba do anya n’ọrụ ka mịnịstrị ahụ chọrọ ugbua n’ihi oke ọrụ dịịrị ha maka nchekwa n’ọganihu ala anyị.
Hmm, nwoke a na-ekwu hoo!haa!! etu ọ siri dị ya n’obi. Sọọsọ ihe dị mwute bụ na ya bụ nwoke achịtaghi aja n’ọchịchị ya dịka Gọvanọ Ọshụn Steeti.
Previous Post: A NWAKWALA ANYỊ! , ỤMAHỊ GWARA NNAMDI KANỤ
Next Post: ENUGWU:FULANI EGBUOLA MA BỌWAA AFỌ NWANYỊ DỊ IME